ခံတွင်း Turinabol (ပါးစပ် Tbol) အမှုန့် (2446-23-3) ≥98% | AASraw အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / testosterone အမှုန့်စီးရီး / ခံတွင်း Turinabol (ခံတွင်း Tbol) အမှုန့်
SKU: 2446-23-3. Categories: testosterone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, ခံတွင်း Turinabol ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (ခံတွင်း Tbol) အမှုန့် (2446-23-3) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ခံတွင်း Turinabol (ပါးစပ် Tbol) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ခံတွင်း Turinabol (ပါးစပ် Tbol) အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: ခံတွင်း Turinabol (ပါးစပ် Tbol) အမှုန့်
အရောင်: အဖြူရောင်အမှုန့်ဟာ Off
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ခံတွင်း Turinabol (ပါးစပ် Tbol) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
ခံတွင်း Tbol အမှုန့် (ပါးစပ် Turinabol အမှုန့်) အမည်များ
ခံတွင်း Turinabol အမှုန့်ကိုလည်းစသည်တို့ကိုခံတွင်း Tbol အမှုန့် (CAS 2446-23-3), ညီလေး, ဟုခေါ်သည်
ခံတွင်း Tbol အမှုန့် (ပါးစပ် Turinabol အမှုန့်) အသုံးပြုမှု
ခံတွင်း turinabol လေ့ပါးစပ်အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ အထီးအဘို့, များသောအားဖြင့် 15mg-40mg တစ်ရက်, 8 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပို; အမျိုးသမီး, 2.5 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပိုတစ်နေ့လျှင်ပုံမှန်အားဖြင့် 5-6mg သည်။
ခံတွင်းကို T-BOL danabol အောက်ပါတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်း t ကို bol danabol အဖြစ်ရေ retention ကိုမထိခိုက်စေဘဲကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ယင်း၏အရေးယူအနည်းငယ်နှေးကွေးဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အကျိုးအမြတ်တည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကဟိုပြင်ဆင်မှု testosterone ဟော်မုန်း၏သဘာဝထုတ်လုပ်မှု, ကုသမှုရဲ့အဆုံးမှာအသုံးပြုသူကိုသဘာဝမုန့်စိမ်းတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့ထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်ကျော်ကသူ့ကြွက်သားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်စံပြ။
Chlorodehydromethyltestosterone, ပိုမိုအသိအမှတ်ပြုအမှတ်တံဆိပ်ခံတွင်း Turinabol များအတွက်ယေဘုယျအမည်, Dianabol တစ်အစွမ်းထက်ဆင်းသက်လာသည်။ ဤသည်မှာပါးစပ် Steroid တစ်မျိုး clostebol ၏ဆက်ပြောသည် 4-chloro အပြောင်းအလဲတချို့နှင့်အတူ Dianabol ကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံရှိခြင်း, ဖွဲ့စည်းပုံ methandrostenolone နှင့် clostebol (4-chlorotestosterone) အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲတချို့ chlorodehydromethyltestosterone Dianabol တစ်ပျော့ဝမ်းကွဲမရှိအီစရိုဂျင်နှင့်၎င်း၏ပိုပြီးကျော်ကြားအဆွေတော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်အများကြီးလျော့နည်းအန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုပြသသစ်ကို Steroid တစ်မျိုးစေသည်။ chlorodehydromethyltestosterone ၏ဟိုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ကောင်းစွာ Dianabol ၏ထက်အတန်ငယ်နိမ့်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အန်ဒရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဟိုတစ်ဦးပိုပြီးအဆင်သင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါဘူး။ ဒါကကြွက်သားတည်ဆောက်မှုလှုပ်ရှားမှုမဆိုပေးထားအဆင့်မှာ, chlorodehydromethyltestosterone အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထုတ်လုပ်ရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ခံတွင်း Turinabol တစ်ဘုံလက်တွေ့ထိုးတစ်နေ့လျှင်5မီလီဂရမ်ခန့်မှန်းလျက်ရှိ၏ အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလမျးညှနျခရရှိနိုင်ပါ။ အားကစားနယ်ပယ်တွင်များတွင်ထိရောက်သောပါးစပ်နေ့စဉ်သောက်သုံးသော hepatotoxicity minimize လုပ်ဖို့ 15-40 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပိုကြာရှည်သံသရာအတွက်ယူ 6-8 မီလီဂရမ်၏အကွာအဝေးအတွင်းကျရောက်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ပိန်ကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားအတွက်တိုင်းတာတိုးဘို့လုံလောက်သည်။ ဤသည်အေးဂျင့်အများဆုံးမကြာခဏ Pre-ပြိုင်ပွဲအဖြစ်လျှောက်ထားသို့မဟုတ်ကာယဗလရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Steroid တစ်မျိုးဖြတ်တောက်နှင့်ကြောင့်အီစထိုဂျင်၎င်း၏မရှိခြင်းရန်စံပြ bulk အေးဂျင့်အဖြစ်ရှုမြင်သည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းမဆိုအပိုရေသို့မဟုတ်အဆီအလေးချိန်န်းကျင်သယ်ဆောင်ရန်မလိုဘဲတစ်ဦးခိုင်ဟိုအကျိုးအတွက်ရယူ, chlorodehydromethyltestosterone အတွက်ခိုင်မာတဲ့မျက်နှာသာရှာတွေ့လည်းမူလတန်းအာရုံဖြစ်လေ့ရှိရာအားကစားအတွက်အားကစားသမားများ။
ခံတွင်း Turinabol တစ်ဘုံလက်တွေ့ထိုး 1-2.5 တစ်နေ့လျှင် MG ဖြစ်ခန့်မှန်းလျက်ရှိ၏ အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလမျးညှနျခရရှိနိုင်ပါ။ အားကစားနယ်ပယ်တွင်, အမျိုးသမီးများလေ့ hepatotoxicity minimize လုပ်ဖို့ 5-4 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပိုကြာရှည်သံသရာအတွက်ယူတစ်နေ့လျှင်တစ်ခုတည်း6မီလီဂရမ်တက်ဘလက်, ယူလိမ့်မယ်။ Virilizing အကျိုးသက်ရောက်မှုများအသုံးပြုမှု၏ဤအဆင့်မှာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အများကြီးပိုမိုမြင့်မားဆေးများမကြာခဏယခင် GDR doping အစီအစဉ်တွင်ပေမယ့်မကြာခဏခိုင်မာတဲ့ virilizing ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အကြိုးပအမျိုးသမီးအားကစားသမားတွေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
IV အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်သိပ္ပံနည်းကျစာပေများတွင်အဆိုပါဝက်ဘဝ 16 နာရီ; သို့သော်ပါးစပ်ဝက်ဘဝသေချာပေါက်အဆိုပါ same1 မဟုတ်ပါဘူး။ ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဝက်ဘဝသို့သော်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အမှန်တကယ် IV dose1 နှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ပထမဦးဆုံး Pass နှင့်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချအထွတ်အထိပ်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်မှတိုတောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ကြာကြာ IV အုပ်ချုပ်ရေးထက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စက္ကူတစ်ဦးမျှမျှတတတိုတောင်းသောဝက် life2 အကြံပြုထားသည်။ A ကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက် 12 နှင့် 20 နာရီအကြားဖြစ်နိုင်ဖွယ်စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကိုနှင့်အတူဤ Steroid တစ်မျိုး၏ထက်ဝက်-အသက်အဘို့အနည်းဆုံးရှစ်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ်ရာတစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝက် life3 များအတွက်စောဒကတက်ပြီးနောက်ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏ metabolites အချိန်ကြာမြင့်စွာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။
ခံတွင်း Turinabol သုံးနေစဉ်အသုံးပြုသူများကသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏တော်တော်လေးခိုင်မာတဲ့ဖိနှိပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးအဆိပ်သင့်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်သာအနည်းငယ်ပိုပြီးအဆိပ် methandrostenolone ၏တန်းတူဆေးများထက်အသည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးယခင်အရှေ့ဂျာမန်အိုလံပစ် doping အစီအစဉ်၏ State-sponsored doping အစီအစဉ်တွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်လူသိများသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအထူးအိုလံပစ်အတွက်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအားကစားသမားများအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ ယောက်ျားကိုလည်းကုသခံခဲ့ရသည်သော်လည်းသူတို့ကုသမှုအများကြီးပိုကောင်းတုံ့ပြန်သောကွောငျ့, အမြိုးသမီးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ 10 သာ 20 ၏ဆေးများအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်မှတ်သားတိုးထုတ်လုပ်တစ်နေ့လျှင် MG ။ ဒီပရိုဂရမ်ကိုလည်း mestanolone, ခံတွင်း Turinabol, 11-chloro-methyltestosterone, 4-chloro-mestanolone, methandrostenolone Testosterone နှင့် nandrolone Ester ၏ 4-beta ကို hydroxy ပုံစံအဖြစ်အချို့သောစိတ်ကြွဆေးနှင့် peptide ဟော်မုန်းကဲ့သို့အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများပါဝင်သည်။ ကအကောင်းဆုံး results4 အစီရင်ခံရန်သလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတောင်မှခံတွင်း Turinabol အာရုံဖြစ်ခဲ့သည်။
ခံတွင်း Turinabol 100 ၏ပိုလျှံတစ်နေ့လျှင် MG အတွက်သုံးပြီးလူတို့နှင့်အတူနောက်ကျောစျေးကွက်အပေါ်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖွင့်ပြသခဲ့သည်။ ဒီဆေးထိုးမှာ, တဦးတည်းထုတ်ကုန်မှန်ကန်သော Steroid တစ်မျိုးပါရှိသည်သို့မဟုတ် dosed အောက်မှာဒါမှမဟုတ် "ကပို သာ. ကောင်း၏" ၏ဖွင့်အခြားအမှုလျှင်လျှင်တွေးမိဖို့ရှိပါတယ်။
ကုန်ကြမ်းခံတွင်း Tbol အမှုန့် (CAS 2446-23-3) ရက်တွင်သတိပေး
ခံတွင်း Turinabol ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမြေကြီးပေါ်မှာမဆိုဟို Steroid တစ်မျိုး၏ mildest တချို့ရှိနေပါတယ်။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်းဒါဟာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသော, အနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ controller ဖြစ်သင့်ပေမယ့်သငျသညျတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤ Steroid တစ်မျိုးသုံးစွဲဖို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
chlorodehydromethyltestosterone အနေနဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်သော်လည်းအန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကဒီဥစ်စာနှငျ့နေဆဲဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအဆီပြန်အသားအရေအမျိုးအစားအကြိမ်ကြိမ်, ဝက်ခြံနှင့်ခန္ဓာကိုယ် / မျက်နှာဆံပင်ကြီးထွားပါဝင်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ထက်မြင့်မားထိုကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေဖို့ပိုများပါတယ် Doses ။ ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်လည်းအထီးပုံစံဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများနေ့ဒါ့အပြင်ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်၏အလားအလာ virilizing သက်ရောက်မှုသတိပေးနေကြသည်။ ဤအသံပိုမိုနက်ရှိုင်း, ရာသီမမှန်, အရေပြား texture အတွက်အပြောင်းအလဲမျက်နှာဆံပင်ကြီးထွားမှု, နှင့် clitoral ပျတိုးပါဝင်နိုင်သည်။ Chlorodehydromethyltestosterone ကျယ်ကျယ်အဆိုပါ 5-alpha-reductase အင်ဇိုင်းများက metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဆွေမျိုးအန်ဒရိုဂျင်ကိုအလွန် finasteride သို့မဟုတ် dutasteride ၏တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုပြောင်းလဲမဟုတ်ပါ
Chlorodehydromethyltestosterone တစ် c17-alpha-alkylated ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲတချို့ခံတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါသွေးကြောထဲသို့မူးယစ်ဆေး entry ကိုတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားရာခိုင်နှုန်းခွင့်ပြု, အသည်းအားဖြင့် Deactivate ကနေမူးယစ်ဆေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ C17-alpha-alkylated ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက် hepatotoxic နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်မြင့်မားသောထိတွေ့အသည်းပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်။ ရှားပါးဖြစ်ရပ်အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာအသည်း function ကိုနှင့်ယေဘုယျကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီသံသရာကာလအတွင်းအခါအားလျော်စွာဆရာဝန်တစ်ဦးသွားရောက်အကြံပြုလိုတယ်။ c17-alpha-alkylated steroids ၏စားသုံးမှုအသည်း strain မြင့်တက်ရှောင်ရှားရန်ကြိုးပမ်းအတွက် 6-8 ရက်သတ္တပတ်မှလေ့ကန့်သတ်သည်။ မည်သည့် hepatotoxic ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်ကိုယူပြီးနေစဉ်ထိုကဲ့သို့အသည်းတည်ငြိမ်မှု, Liv အဘိဓါန်-52, ဒါမှမဟုတ် Essentiale Fort အဖြစ်အသည်း detoxification ဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပေးသည်။
ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်သွေးရည်ကြည်လက်စထရောလ်အပေါ် deleterious သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည် HDL (ကောင်းသော) လက်စထရောတန်ဖိုးများကိုလျှော့ချရန်နှင့် arteriosclerosis ပိုမိုအန္တရာယ်နှာတစ်ဦးဦးတည် LDL ချိန်ခွင်လျှာဖို့ HDL shift ရသော LDL (မကောင်းတဲ့) လက်စထရောတန်ဖိုးများ, တိုးမြှင့်ဖို့တဲ့သဘောထားကိုပါဝင်သည်။ အဆိုပါသွေးရည်ကြည် lipids တခုတခုအပေါ်မှာဟို / အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး၏ဆွေမျိုးသက်ရောက်မှုဆေးထိုးအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါတယ်, (ထိုးဆေး vs. ပါးစပ်) အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်း (aromatizable သို့မဟုတ် Non-aromatizable) Steroid တစ်မျိုး၏, အမျိုးအစားနှင့် Hepatic ဇီဝြဖစ်ဖို့ခုခံ၏အဆငျ့။ Chlorodehydromethyltestosterone ယင်း၏ Non-aromatizable သဘောသဘာဝကြောင့်လက်စထရော, အသည်းပျက်ပြားစေရန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာခုခံနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်း၏ Hepatic စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်တစ်ဦးခိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်လည်းဆိုးရွားစွာ, သွေးဖိအားနဲ့ triglyceride ထိခိုက်စေ endothelial အပန်းဖြေလျှော့ချနှင့်လက်ဝဲ ventricular hypertrophy ကိုထောကျပံ့, ရှိသမျှအလားအလာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့် myocardial infarction ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးတက်ကြွနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တက်ကြွ AAS အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းခပ်သိမ်းသောကာလပြည့်နှက်ဆီ, လက်စထရောနှင့်ရိုးရှင်းသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များစားသုံးမှု minimize လုပ်ဖို့အကြံပေးတာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသွေးကြော strain ကိုလျှော့ချကူညီဖို့ရန်။ ငါးဆီ (တစ်နေ့လျှင်4ဂရမ်) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော Lipid တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်သဘာဝလက်စထရော / ဓါတ်တိုးပုံသေနည်းတွေနဲ့ဖြည့်စွက်ကိုလည်းအကြံပြုသည်။
ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု (testosterone နှိမ်နင်းရေး)
ကြွက်သားအမြတ်မြှင့်တင်ရန်လုံလောက်သောပမာဏအတွက်သိမ်းယူသည့်အခါအားလုံးဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက် endogenous testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဖိနှိပ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ testosterone ဟော်မုန်း-လှုံ့ဆော်ဖို့တ္ထုများရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲ, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးခွဲထွက်၏ 1-4 လအတွင်းပုံမှန်ပြန်လာသင့်တယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ hypogonadotrophic hypogonadism ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်, Steroid တစ်မျိုးအလွဲသုံးစားမှုမှအလယ်တန်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်မသတိပြုပါ။
ခံတွင်း Tbol အမှုန့်နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိရင်ခံတွင်း Turinabol များ၏သက်ရောက်မှုများအားကစားသမားဖို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အားကစားသမားအားဖြင့်ငါတို့သည်တကယ်အားကစားသမားဆိုလို။ ကျနော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားကစားအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့သူတဦးတည်းမဟုတ်ဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကများကဲ့သို့အသက်ရှင်တော်မူသည်သောကာယဗလမယ်သို့မဟုတ်အားကစားရုံကြွက်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခံတွင်း Turinabol ၏အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာကြွက်သားခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းအထဲကပနျးမည်မဟုတ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသူတို့ရဲ့ခြုံငုံမှုနှုန်းသည်အလွန်တိုးတက်လာရပါမည်။
ခံတွင်း Turinabol အမှုန့် (CAS 2446-23-3)
ခံတွင်း Tbol အမှုန့်စျေးကွက်
ခံတွင်း turinabol အမှုန့် (CAS 2446-23-3) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို; AASraw ထံမှခံတွင်း Tbol အမှုန့်ကိုဝယ်
AASraw ပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% ခံတွင်း turinabol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
ခံတွင်း turinabol ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
50ML ရဲ့ @ 20MG / ML
5ML ရဲ့ PS80
1gram အမှုန့် (Winnie, anavar, dbol, ညီလေး, etc ။ )
1ML waterbased အနံ့အရသာ
50ML ရဲ့ @ 50MG / ML
2.5grams အမှုန့် (စသည်တို့ကို Winnie, anavar, dbol, ညီလေး,)
Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်